မြန်မာပြည်သူ/သားတွေ လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ MMA ဖိုက်တာ ကိုဖိုးသော်ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ…. – Cele Oscar
မြန်မာပြည်သူ/သားတွေ လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ MMA ဖိုက်တာ ကိုဖိုးသော်ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ….
May 29, 2021 By L YC News
ပရိသတျကွီးရေ MMA လကျဝှေ့ ကစားသမား တဈဦး ဖွဈတဲ့ ဖိုးသျော ကတော့ ဗုံး ပေါကျကှဲမှုမှာ အပွငျး အထနျ ဒဏျရာ ရရှိခဲ့ပွီး ယခုအခြိနျမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူ နရေတာ ဖွဈပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ(၅)ရကျနေ့ ညပိုငျးက ရနျကုနျမွို့ ကနျတျောကွီး ပတျလမျးရှိ ယူရိုး ပီးယားတာဝါ ဗုံးပေါကျကှဲ မှုမှာ ဖိုးသျောက အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရလောကျ တဲ့အ ထိ ထိခိုကျ ဒဏျရာတှေ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ယူရိုးပီးယားတာ ဝါ ကတော့ MMA သငျတနျး နဲ့ အားကစား ခနျးမ (GYM) လညျး ဖှငျ့ထားပွီး ဖိုးသျော ကိုယျတိုငျ လကေ့ငျြ့မှုတှေ မကွာခဏ ပွုလုပျတဲ့ နရောလညျး ဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ဖိုးသျော ကတော့ အဆိုပါ ဗုံးကှဲမှု ဖွဈစဉျကွောငျ့ အမှတျ(၂)စဈဆေး ရုံမှာ လကျရှိ ဆေးကုသမှု ခံယူနတောဖွဈပွီး ဖခငျဖွဈသူ ဦးအောငျနိုငျ ကိုယျတိုငျ ပွုစု ပေးနတောလညျး တှရေ့ ပါတယျ။
ဖိုးသျောဟာ ဆိုရငျ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီး အတှငျး လမျးပျေါ ထှကျ လှုပျရှားမှု တှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ တကျကွှစှာ တတျနိုငျ သလောကျ အားလုံး နဲ့ အတူ ရပျတညျခဲ့ သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ဗုံး ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ထိခိုကျ ဒဏျရာတှကေို ဆေးကုသမှု ခံယူနရေတဲ့ ဖိုးသျော တဈယောကျ အမွနျဆုံး နပွေနျကောငျး ကနျြးမာလာစဖေို့ကို မိသားစုတှေ နဲ့ အတူ ပရိသတျတှေ ကလညျး ဆုတောငျး ပေးထား ကွတာ တှရေ့ပါတယျ။ဖတျရှု ပေးတဲ့ပရိသတျကွီး ကို အထူးပဲကြေးဇူး တငျပါတယျနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ MMA လက်ဝှေ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော် ကတော့ ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုမှာ အပြင်း အထန် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူ နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ(၅)ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းရှိ ယူရိုး ပီးယားတာဝါ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုမှာ ဖိုးသော်က အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက် တဲ့အ ထိ ထိခိုက် ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုးပီးယားတာ ဝါ ကတော့ MMA သင်တန်း နဲ့ အားကစား ခန်းမ (GYM) လည်း ဖွင့်ထားပြီး ဖိုးသော် ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်မှုတွေ မကြာခဏ ပြုလုပ်တဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ဖိုးသော် ကတော့ အဆိုပါ ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် အမှတ်(၂)စစ်ဆေး ရုံမှာ လက်ရှိ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတာဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်နိုင် ကိုယ်တိုင် ပြုစု ပေးနေတာလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
ဖိုးသော်ဟာ ဆိုရင် တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီး အတွင်း လမ်းပေါ် ထွက် လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ တတ်နိုင် သလောက် အားလုံး နဲ့ အတူ ရပ်တည်ခဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ ဖိုးသော် တစ်ယောက် အမြန်ဆုံး နေပြန်ကောင်း ကျန်းမာလာစေဖို့ကို မိသားစုတွေ နဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေ ကလည်း ဆုတောင်း ပေးထား ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်။
သားငယ်လေး အတွက် လှူဒါန်းပေးထားတဲ့ ခြေတုလေးရလို့ ပျော်နေတာကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလတ်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေ တွေ အေးချမ်းပြီး ပုံမှန်ပြန် ဖြစ်သွားရင် SHOW ပွဲတွေပြန်လာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း